Sawirro: Jabuuti oo gaashaanka u daruurtay hubka la sheegay in Soomaalia loo soo mariyo. – Xeernews24
Sawirro: Jabuuti oo gaashaanka u daruurtay hubka la sheegay in Soomaalia loo soo mariyo.
Sidda aan wararkeena hore ku sheegnay dowlada Jabuuti ayaa lagu eedeeyay in ay Hubka sharci darada ah soo galiso gudaha dalka Soomaalia kuwaa oo si sahlan ugu gacangala maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Hubkan oo noocyo kala duwan leh ayaa la sheegay in si fudud ay ku helan Al-Shabaabka, iyagoo u adeegsada gumaadka ay ku hayaan shacbiga iyo dagaalka ay kula jiran dowlada Soomaalia.
Warbixin ay soo saartay sharkadda laga leeyahay Dalka Ingiriiska ee EXX Africa, ayey ku sheegtay in saraakiil ka mid ah dowladda,Ganacsato iyo xubno kale ay si dadban hub sharci darro ah ku geliyaan Soomaaliya.
Dowladda Jabuuti oo ka duuleysa eedeymaha Hub galinta Soomaalia ayaa iska fogeysay warbixinta EXX Africa, waxa ayna tilmaantay inaanu jirin Hub sharci daro ah oo ay galiso dalka Soomaalia.
Qoraal ka soo baxay Wasiirka arrimaha dibadda Dalka Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf ayuu ku difaacay dalkiisa waxa uuna waxkama jiraan ku sheegay eeda loo jeedinayo ee ku aadan Hubka sharci darada ah.
Wasiir Maxamuud ayaa sheegay inaanu raad laheyn warbixinta laga diyaariyay Jabuuti islamarkaana dalkiisa uu ka go’anyahay nabadda iyo deganaanshaha Gobolka.
Sidoo kale, Wasiirka ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in baahinta warkaasi loo helo cadeymo, waxa uuna ka gaabsaday inay suuragal tahay in Ganacsatada dalkiisa ay si qarsoodi ah Hubka ugu soo raraan Soomaalia.
Haddalka, Wasiir Maxamuud ayaa kusoo beegmaya xili EXX Africa ay muujisay in cadeymo hubaal ah ay u heyso in dowlada Jabuuti ay Hubka si sharci daro ah ku galiso Soomaalia.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/09/Hub-10.jpg 300 400 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-09-18 17:32:582018-09-18 17:32:58Sawirro: Jabuuti oo gaashaanka u daruurtay hubka la sheegay in Soomaalia loo soo mariyo.
DAAWO; ceebta Xildhibaan reer Saylac ah oo Dhakhatarka digfeer la dhigay ka... Daawo kacdoon istaadhmay iyo Qoomiyadihii Aan Oromada ahayn oo Is Bahaystay...